Ungayibona Kanjani i-iPhone Fake 12, Mini & Pro Max? - Amagajethi
Ungayibona Kanjani i-iPhone Fake 12, Mini & Pro Max?
Kulezi zinsuku, ukuthola izinto emnyango wakho kulula kakhulu kubantu besigaba sebhizinisi. Kepha uyazi ukuthi ukwamukela imikhiqizo yomgunyathi kujwayelekile kulezi zinsuku? Manje ukuthenga i-iPhone kuzokubiza ngokweqile futhi kuthiwani uma uthenga i-iPhone ecebile kodwa eyimbumbulu ngentengo yezindleko zangempela. Akuthusi yini? Ngakho-ke, ukuqeda amaqola anjalo, kungcono ukufaka umkhiqizo wonke ngaphambi kokuwuthatha kumhlinzeki. Ukubona i-iPhone 12 Pro, mini, ne-iPhone 12 pro max ukuthi ngabe iyiqiniso noma iyimbumbulu kubalulekile kulezi zinsuku.
Ukwenza i-xerox ye-iPhone futhi uyithengise njengeyangempela akuyona into enzima njengei- “mbumbuluIPhone”Ukumaketha sekuyibhizinisi elinenzuzo enkulu yokuhlenga izintoifoniabakhiqizi.I-iPhone mbumbulu ivame ukuphindaphinda umkhiqizo wokuqala ngosayizi wayo, ukubekwa kwezinkinobho, ilogo ye-Apple, nezinye izici zangaphandle noma zangaphakathi ze-iPhone yangempela.
Ngeshwa, zibukeka ziyefana ezikhangisweni zangempela noma ezitolo zomhlaba wangempela. Akunandaba nokuthi avela kuphi, akhona lapho, futhi abantu abawathengayo bayabanjwa.
Ngokuzenzakalelayo, ngasikhathi sinye, imizamo eyenziwe ngamaphoyisa yokuqeda umkhonyovu mbumbulu we-iPhone emakethe ayiphumelelanga. Ngakho-ke, okunye ukucaciseleka okuhle ukusabalalisa ukuqwashisa nemfundo phakathi kwabantu futhi kubavimbele ekubeni yisisulu sokuthenga ama-iPhones kubakhiqizi abangenasimilo.
Amamodeli we-iPhone 12 Pro (A2341, A2406)
Ungayibona Kanjani i-iPhone Yenkohliso 12, Mini, ne-Pro Max?
Ukupakisha:Ukupakisha kuyisici sokuqala nesivelele esingasolisa. Iphakethe langaphandle lingahle lihlukaniswe kepha imvamisa lenziwa ngezinto ezishibhile. Ekuqaleni, lapho ukhipha i-iPhone yakho i-iPhone eyimbumbulu iyohlala igcwele kupulasitiki kunokuba ithebhu yokudonsa. Imiyalo yomkhiqizo ingaba ngezinhlamvu ezinkulu zangaphandle.Ibhokisi elisemthethweni le-iPhone 12 pro liqukethe imininingwane ephathelene nomkhiqizo ofana `nemodeli, konke mayelana nefoni, izwe lokukhiqiza, inombolo ye-serial, nekhodi yebha eqinisekisa ukuthi iqalile.
I-APPLE LOGO:Lokhu kungabizwa njengokuqina kakhulukumhlahlandlela wethu wokuthi ungayibona kanjani i-iPhone 12 Pro noma i-iPhone 12 Pro Max eyimbumbulu. Uma uyithatha ngopulasitiki bese ubheka emuva ocingweni lapho-ke uzothola umehluko omncane kakhulu phakathi kwe-iPhone yangempela nenkohliso ngophawu oluhlehlisiwe noma ukuqedwa kwesibuko.
Izikrufu ze-PENTALOBE: Okulandelayo ungabheka izikulufo ezijwayelekile kumachweba wokushaja asetshenziswa kwimikhiqizo ye-iPhone. I-iPhone inamaphoyinti amahlanu ekhanda.Uma uthola noma yisiphi isikulufa esiphambanweni esijwayelekile kusho ukuthi kuwuphawu lokuthi i-iPhone 12 pro mini, i-iPhone 12 pro max oyiphethe iyimbumbulu.
UMZIMBA WEKHAMERA:Into elandelayo ongayihlola ngemuva kokushaja itheku ikhamera eyakhiwe ngemuva kwefoni. Le ikhamera nje iyodwa. Ngokuyisisekelo, i-iPhone 12 mbumbulu ne-iPhone 12 pro max inika ikhamera ngobude obungaphansi kwefoni yangempela.
AMAKHADI E-SD ANGAPHANDLE:I-iPhone 12 pro, mini ne-iPhone 12 pro max ayinayo i-slot yememori khadi yangaphandle. ngakho-ke, uma uthola noma iyiphi i-slot yekhadi le-SD langaphandle ku-iPhone 12 pro, mini ne-iPhone 12 pro max ke yi-iPhone eyimbumbulu.
SIYAKWAMUKELA ILOGO:Manje ngemuva kokuvula i-iPhone yakho into yokuqala oyibonayo ilogo yokwamukela. Lokhu akuyona into ozoyithola ku-fake 12 ye-iPhone ne-iPhone 12 pro max. Ngokuyisisekelo, uzothola ukubona 'ukwamukela' kubhaliwe kune-Apple logo yangempela.
HLOLA ISIRI:Uhlelo lweSiri lusebenza kuphela ku-iPhone 12 pro, mini ne-iPhone 12 pro max nakwezinye izinhlobo zama-iPhones, uma uSiri engasebenzi bese ubheka njenge-iPhone eyimbumbulu.
HLOLA UHLELO OSEBENZA:Uma uthola noma yiluphi uhlelo lokusebenza ngaphandle kwe-iOS mhlawumbe i-iPhone eyimbumbulu ngoba i-iPhone 12 pro, mini ne-iPhone 12 pro max isebenzisa i-IOS enelungelo lobunikazi njengohlelo lwayo olusemthethweni olusebenzayo.
I-IMEI / INOMBOLO YESIModeli Uma ubheka izilungiselelo zakho uzothola i-IMEI / MODEL NUMBER ye-iPhone. Uma inombolo etholakala njengenombolo yemodeli kuzilungiselelo zefoni nangaphansi kwebhokisi ihlukile, leyo foni nakanjani iyi-iPhone eyimbumbulu.
IKHAMERA APP:Njengoba sazi ukuthi izinhlelo zokusebenza zekhamera zifakiwe ngaphakathi kwefoni. Okwamanje umfanekiso we-iPhone 12 ne-iPhone 12 Pro Max awunayophezulu kwekhamera yomugqa kuzo ukuze uzobona umehluko omkhulu ngekhwalithi. Ngaphandle kokuthi uphelelwe yisikhathi ngama-smartphone awukwazi ukuthola umehluko kwikhwalithi yekhamera ngaphambili nangaphambili.
ISITUNES NESITOLO SE-APULA:Manje nangu umehluko omkhulu kunawo wonke wokuhlukanisa phakathi kwe-real and fake ye-iPhone 12 pro ne-iPhone 12 pro max. Iningi lamadivayisi mbumbulu e-iPhone 12 Pro ne-iPhone 12 Pro Max asebenza ku-Android ngoba angalungisa isikhumba se-interface namadivayisi we-android awanaso isitolo se-iTunes noma se-Apple. Uma uchofoza lokhu uzothola olunye uhlelo lokusebenza noma isitolo sokudlala seGoogle.
UKUKHANYA UKUKHANYA:Ngemuva kokuvula i-iPhone yakho into yokuqala ongayibona ngocingo lwakho kungaba umbala ogqamile. Imibala yesikrini ingabonakala ifiphele futhi uzocabanga ukuthi izinga lokukhanya lehlile.
Ngiyethemba uzwisise ukuqhathanisa phakathi kwe-pro 12 yangempela ne-fake 12 pro, mini ne-iPhone 12 pro max. Bheka nje izici zangaphandle ze-iPhone yakho njengokufaka, i-Apple logo, izikulufo ze-Penta lobe, umzimba wekhamera, nesikhala sangaphandle sekhadi le-SD. Thola okuthile okuhlukile kune-iPhone yangempela kunalokho okufana nalokho okuku-iPhone. Okwamanje, uma uthola noma yini exakile ngemuva kokuvula i-iPhone efana ne-logo eyamukelekile, iSiri, isistimu yokusebenza, inombolo yemodeli, uhlelo lokusebenza lwekhamera, isitolo se-apula noma ukukhanya kwesikrini njengoba sekuxoxwe ngenhla lapho i-iPhone ingumbombayi. ngakho-ke, masiqaphele futhi sazi wonke umuntu ngenkathi uthenga i-iPhone kunoma iyiphi isayithi noma isitolo.
Ukulanda kwamahhala kweRoblox (2020) - Ungawufaka Kanjani Umhlahlandlela Wokudlala
mp3 umculo wokuguqula i-youtube
umdlalo olula emhlabeni ungavinjelwe
uyixhumanisa kanjani i-akhawunti ye-xbox roblox ne-pc
yenza kusebenze i-hulu nge-disney plus
yi-123movies esemthethweni ukubukwa
ngabe akukho emthethweni ukusakaza ama-movie kwi-inthanethi